Kuhle Coast Dominican resort of Punta Cana, lapho ihhotela Whala Bavaro 3 *, sengathi nokuntula iqhwa emigodini. umbono okunjalo, lapho ebuka phezulu eliyisiqhingi laseHaiti. Ugu, nhlangothi zombili ke, izungezwe siyakhazimula isihlabathi esimhlophe okungafani ne blue eliqhakazile olwandle friendly.
Ihhotela akuyona zikanokusho ngokumangalisayo elingaphakathi, kodwa ubuhle bemvelo insimu yalo ukunikeza sichichime injabulo zonke izivakashi. Coast shining pearl isihlabathi esimhlophe ugcwele kakhukhunathi zezandla. Ngaphezu kwakhe, waba ngukumkani ukuthula oluphelele nokuzola oyifunayo.
Punta Cana uye walungiselela yokukhosela ophambili hotel chains emhlabeni, okuhlanganisa ehhotela eziyinkimbinkimbi Whala Bavaro 3 *, sehlela emngceleni Bavaro Beach. Phumula ehhotela ezineziqhumane yeningi uncamela izinkampani intsha, izivakashi kanye nemindeni yabo futhi abalandeli asebenzayo zasolwandle yokuzilibazisa ngezinga elingakanani.
Isakhiwo ehhotela isendaweni eliyisiqhingi laseHaiti, 22 ukusuka esikhumulweni sezindiza of Punta Cana. It ithatha ingxenye Umugqa wokuqala kolwandle ogwini Bavaro ne esiyingqayizivele ezimhlophe coral isihlabathi. Away Whala Bavaro 3 * olwandle ngamamitha angu-100. He is ezakhelene zegalofu ezimbili - Cocotal ne-Lakes Barcelo.
Eceleni kuba Palma yezitolo Real wesifunda. Ngaphezu kwalokho, lizungezwe izitolo eziningi (bobabili izivakashi ukukhokha in ruble). Ezokuzijabulisa zemicimbi nge disco futhi yekhasino itholakala amakhilomitha amabili kusukela ehhotela. Ngo ukuhamba kude kude, ogwini, a amamitha angamakhulu olwandle, eyakhelwe Dolphinarium Ihlengethwa Island.
Incazelo ingqalasizinda eyinkimbinkimbi ihhotela
Ihhotela kungokwalabo indawo eziyinkimbinkimbi esikhulu, esihlanganisa ngaphezu it has amahhotela ezintathu, amachibi sixhumene. Three esinezitezi ezintathu izakhiwo, wangcwatshwa emthunzini aluhlaza izimila tropical, sizungezwe ichibi elikhulu lizungezwe ithala. Ihhotela kwavele yokulungiswa ezinkulu ngo-2012, kakhulu ekushintsheni ukubukeka kwayo. Manje amakamelo yehhotela kahle bheka yesimanje futhi fresh.
Ngenxa yokulungiswa lalibukeka Suites 13 ezengeziwe, ifakwe imishini emisha. Olungaphambili lwesonto ibuyiselwe, wandisa pool ndawo, ukuba isikhala khulula ubeke ilanga imibhede ne izambulela (Imali for beach izesekeli ngeke ukhokhiswe). I zokudlela ubuyekeze nempahla. Ikamelo has Interiors yesimanje, thina indawo esibukweni futhi efakwe amapayipi amasha.
Endaweni yokwamukela izivakashi yehhotela 3 * Whala Bavaro (Punta Cana) wadala ibha futhi kwadingeka wireless inthanethi. Amakamelo akudingeki internet, nasezindaweni zomphakathi futhi wakhokha. Ngaphezu kwalokho, ihhotela ngezinye Beach Club, okuyinto ifakwe bar isidlo. ngezizathu Ihhotela ifakwe yokupaka, ukubonakala endaweni yakhe ngoba mini-emakethe futhi isikhumbuzo esitolo. Izinga lenkonzo sathathwa ezingeni eliphezulu.
Izivakashi on-call udokotela inikeza, okuyinto ikhokhwe amasevisi. Izivakashi zishintshe imali ku isigatshana lwemali futhi asebenzise ilondolo, ukukhokha amasevisi ayo. okubhukuda ababili ifakwe i on-site amanzi ahlanzekile. Basuke banikezwe kwesigaba ukugeza izingane. Ukuze izivakashi ukubhema, indawo ekhethekile.
Zonke Suites ku zehhotela abahambi non-ukubhema. amakamelo Comfort okuhambelana ihhotela lezinkanyezi Whala Bavaro 3 * (Punta Cana). Badale isimo ethokomele futhi ukunikeza lula ukuze ephelele isabelomali iholide ogwini abadumile angavamile. Izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu uhlale mahhala. Uhlaka ayatfolakala.
22 ehhotela inikezwa amakamelo eduze. It inikeza amakamelo ejwayelekile futhi samakamelo amancane Suite, kufaka lokulala, indlu yami, okugeza, Jacuzzi futhi ikamelo yangasese ekhishwe inyumbazane. Amakamelo okulala awabange kubantu abakhubazekile yokuntuleka amathuba.
Izivakashi zikhishwa udondolo wezilimi eziningi. Inhlanzeko unxenxwa nsukuzonke. Nezincekukazi ngesikhathi esifanele kimi ukusebenzisa amathawula kanye elinemishwe (embhedeni ehlanzekile sahlanganiswa ngosuku), ukukhiqiza yokuhlanza ezimanzi.
I zokuhlala ngenhloso yokubhukuda ezakhelene kuvulandi ivulekile. Amagumbi zamagumbi anemisila air conditioning, abalandeli, Khokha ephephile futhi mini-bar, i-TV. Ikamelo has TV satellite. Ezinye amafulethi babe embhedeni usofa. Izindlu ezincane anemisila hairdryer kanye nenhlanzeko yomuntu siqu imikhiqizo. Bakuhlonyiselwe elineshawa noma ubhavu.
Izivakashi uphumule yangasese lolwandle Amathe, izungezwe coral zemvelo isihlabathi. Kusukela izakhiwo ebhishi eyikhulu namashumi amamitha. Zonke izesekeli lolwandle (izambulela nge emphemeni izihlalo, amathawula kanye omatilasi), izivakashi amahhala. Ibhishi ulayini eqinile, kwamagagasi aphakeme agubhayo up enokwethenjelwa ukuvikela coral. Ngesikhathi sebehlezi ogwini, ibha ukukhonza ukudla okulula, izithelo neziphuzo.
Uhlelo ugesi e yokudlela yehhotela
Izivakashi uzimisele ukusebenzisa amandla onke womanyano uhlelo ukukhonza Whala Bavaro 3 * Ihhotela. Intengo lapha lihlanganisa ezihlukahlukene iziphuzo, ibhulakufesi itafula wakhonza kwasekuseni, kwasemini kanye dinner, ntambama Ungadla. I ukudla zokudlela Yenziwe imikhiqizo zendawo.
Ububanzi zokudlela ehhotela, hhayi ngiyajabula ezihlukahlukene ekhethekile izitsha, ngijabulisa izivakashi ukunambitheka kwabo futhi umsoco. Ukunambitheka ayo kanye izithelo wehlukile leyo ehambisana izimpahla ezitolo. Elimnandi izithelo namanzi avuthwa ngaphansi imisebe yelanga ezishisayo iziphuzo wabo ukunambitheka emangalisayo. Ukusebenzisa kwabo inika injabulo yeqiniso.
Ikakhulukazi izitolo zokudlela nezindawo zokuphuza
Okukhethekile yokudlela Rompeolas - cuisine ngamazwe. Kanye ngesonto, ekusingathayo sokudla ezinezihloko. Barbecue kanye ngesonto e Hospitality umema Beach Club. Sitolo sekudla lokuphekiwe A La Carte wapha ukudla Dominican izitsha. iziphuzo Amazing nokukhanya Ungadla ziphathwa ku Amabha amathathu - ogwini, lounge emugqeni we Orquidea sika.
Njengoba uzungezwe Whala Bavaro Ihhotela 3 * ensimini ka Punta Cana, zikhona zokudlela eziningi kanye amathilomu, lapho chef, uyingcweti ubuqili gastronomy, izivakashi etotoswayo ngazo zonke izinhlobo zezinto izitsha ukudla okuhlukahlukene ezahlukene. Abakwazi ukunambitha izitsha yendabuko Creole cuisine, izitsha international kanye sokudla okwehla esiphundu we "ukupheka izinguquko."
Ukungabi bikho kwempucuko ngokweqile liye ayenza le ndawo yaba wamukelekile zabahamba bafisa ukuphumula wedwa, ukuthula nokuzola, ngamanye amazwi, lapho kukhona imibandela nesokuphumula ephelele futhi aziphumulele. Ngaphandle ebhishi emangalisayo, izungezwe Velvety isihlabathi nolwandle, ohelezayo obvevayuschego Yiqiniso, kukhona ukuzijabulisa asebenzayo Dominican Republic.
3 * Whala Bavaro bazinza Punta Cana - edolobheni nge nightlife umatasa. Kwamenywa amakilabhu emkhathini ashisayo emnandi igazi hot ugeleza emithanjeni yabo. Izivakashi ngaphandle igalofu ehhotela nokudlala, akufundisa ugibele, ngokuvakashela ezikhangayo Dominican Republic.
Ihhotela likuvumela izinhlobo eziningana khulula imisebenzi yangaphandle. Izivakashi ahlinzekwa ukuze ujoyine ukubamba iqhaza izithombe izinhlelo nsuku zonke. Izivakashi ngaphandle komkhawulo wahlanganyela aerobics, Snorkelling (ezingena Snorkelling ngaphansi kwamanzi, simazi kangcono ubuhle ocebile zombuso kwamanzi), ukudlala i-volleyball yasolwandle.
Ziyabuya phezu kwamanzi kolwandle kayaking (izikebhe inflatable) bese ngigibela windsurfing wave. At onawo zabo ebekelwa isikhungo ukuqina ejimini. Hlukanisa nenkokhelo edingekayo Ukushushuluza amanzi, catamarans, motor ezokuthutha zasolwandle, izifundo diving; inqubo e spa-salon, kahle-isikhungo kanye nezinsizakalo massage.
Beach, ezisabalele eduze ehhotela, noma yakhelwe ukuphumula kakhulu. Izivakashi abathanda injabulo abathintekayo lapha akukhona snorkel nje, diving, Windsurfing futhi Awe-Parasailing. Aya Natural Park Manati ukugcina ukuziphatha izilwane izilwane endaweni yazo yemvelo zemvelo.
amaholide Abaningi iqalisa okujabulisayo engibaziyo safari, umzila zazo selibekiwe kanye emasimini ka umoba, ikhofi kanye cocoa. Jeeps enithwala nabo wabonakalisa zikagamthilini emahlathini, okwenza izitobhi e ejwayelekile Dominican emadolobhaneni, lapho izakhamizi zinikeza izivakashi ujabulele izithelo fresh ezishisayo esasisanda waklebhula kusuka amagatsha emithi.
Izivakashi uthole kwalibaleka, futhi ebhukuda amahlengethwa at Ihlengethwa Island Marine Park. Amahlengethwa zihlale eziningi izivakashi yafika yema e Whala Bavaro 3 *. Photo of amahlengethwa ivumela ukugcina unaphakade izikhathi ezimnandi ebhukuda izilwane omkhulu nabanomusa.
Ngokwe-izivakashi, zonke amaphutha ehhotela ziyalinganisela ngu kunezinzuzo zako kanye eziphansi zokuphila. Bona wazi ukuthi ngokuvamile bahle ushiya yokuhlala e Whala Bavaro 3 *. Izibuyekezo zezivakashi ezingaphezu kuka ukugcizelela ezicini ezinhle ehhotela, sizungezwe indawo kuhle landscaped. Yokudlela ukhonza ukudla okuhle kakhulu, evundile, ijusi yezithelo nalivshiesya. amanzi Ukuphuza Coolers avunyelwe ukudayela ngaphandle komkhawulo. Amabha ukunikela isiphuzo ephulukisa "Mama Juana".
Amafulethi elikhanyayo futhi ivulekile kukhona ngokucophelela kususa abasebenzi friendly, okuyinto engenakwenzeka ukuba ubuke ngaphandle kokuphendula ukumamatheka. Nokho, uma egumbini okuthile ehluleka, kuyize ukuya reception ehhotela akhononde. Ngesizotha wathembisa bonyana uzakuthumela amakhosi, kodwa empeleni enza lutho. Kulula malimbambe yena phezu umsebenzi ehhotela ihembe blue ne Isondlo umbhalo, ulilethe egumbini futhi akuchazele ukuthi lokhu kudingeka ukulungisa. Master ngokushesha ukulungisa le nkinga.
Ezokuzijabulisa kanye nezitolo ngaphakathi ukuhamba ibanga. Laba bobabili "Russian" amanani esitolo awashintsheki. Izivakashi ukuwathenga ngoba ruble rum, ikhofi, ukhokho, amabhodlela nge "Mamahuanoy" (noma ingxube eyomile ukulungiselela isiphuzo okwelapha), vanilla neminye imikhiqizo efanelekayo.
Ihhotela Bella Beach Ihhotela 5 * (eKrethe, Greece) izithombe, incazelo kanye nokubuyekeza
Indlela ukubeka sihloko Windows 7 iyiphi inguqulo
Amagama ladidako: izibonelo, incazelo kanye ukusetshenziswa
Ukudoba balancer: Izici
Kanjani ukulungisa: "propylesoshu" noma "ushanela"? Iyiphi indlela ukufunda nokubhala?
"Polisorb" izingane: yokusetshenziswa, umthamo, izinkomba, ukubuyekezwa